Haitỳ - Wikipedia
Mbola ambangovangony amin'ny resaka Haiti ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Repiblik Ayiti ((ht))
Repoblikan'i Haitỳ ((mg))
Teny filamatra : L'union fait la force'
Teny ofisialy fiteny frantsay , kreôly haisianina
18°32′21″N 72°20′11″W﻿ / ﻿18.53917°N 72.33639°W﻿ / 18.53917; -72.33639
Tanàna ngeza indrindra Port-au-Prince
- Rano (%) faha 142
- hakitroka faha 89
9 776 206 mpo.
Anaran'ny mponina Haisianina
Sandam-bola Gorda (HTG)
Faritr'ora UTC -5
Hiram-pirenena La Dessalinienne
I Haitỳ, na Repoblikan' i Haitỳ, dia firenena ao Amerika Afovoany, ao amin' ireo nosy Antilia. I Port-au-Prince no renivohiny. Mirefy 27 750 km² ny velaran-taniny ary nisy mponina miisa 11 067 777 tao tamin' ny taona 2020.
Ao amin' ny ampahany andrefana amin' ny nosy Haiti (na Hispaniola) no misy ity firenena ity, ao amin' ny iray ampahatelon' izany nosy izany. Ny ampahany sisa dia an' ny Repoblika Dôminikana.
Anjakan' ny tendrombohitra ny vohon' ny tanin' i Haity, ary toetanin-jana-pehin-tany ny toetaniny. Ao amin' ny tapany atsimony no misy morontsiraka ao amin' ny Ranomasina Karaîba. Lasibatry ny rivodoza matetika ity faritra atsimo ity.
Sarin-tanin' i Haity
Ny ankamaroan' ny mponina ao Haity dia tarakana andevo mainty hoditra avy aty Afrika. Miaina amin'ny fambolena any ambanivohitra ny ankamaroan' ny mponina. Anisan' ireo firenena mahantra indrindra eto amin' izao tontolo izao i Haity. Tsy ampy ny loharanon-karena voajanahary ao aminy.
Sarin-tany maneho an' i Haity eo anivon' izao tontolo izao
Tamin' ny taona 1804 nonanambaràny ny fahaleovan-tenany nefa tamin' ny taona 1825 vao neken' ny Frantsay izany.
Lasa repoblika mainty manam-pahaleovantena voalohany izy taorian' ny tolom-piavotana haisianina (1791-1803) izay nanala ny tafik' i Napoleon Bonaparte. I Haitỳ irery no firenena miteny frantsay manam-pahaleovantena any Karaîba.
Any amin' ny tapany andrefan' ny nosy Hispaniola i Haitỳ, faharoa amin' ny nosy ngeza indrindra any amin' ireo nosy Antilia. Fahatelo amin' ny firenena ngeza indrindra ao amin' ireo Antilia ny i Haitỳ, eo aorian' ny Repoblika Dôminikana sy i Kioba. Tendrombohitra fotsiny ny ankabeazan' ny tany any Haitỳ. Ny nosy hafa an' i Haitỳ koa dia:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Haitỳ&oldid=1041183"
Dernière modification le 6 Desambra 2021, à 13:06
Voaova farany tamin'ny 6 Desambra 2021 amin'ny 13:06 ity pejy ity.